Ama-Archives WAMAKHONANI WAMAKHONANI - Ikhasi 3 kwezingu-7 - AFRIKHEPRI
IPan African University (noma iPan African University) (PAU) uqeqesho lokuqeqeshwa kwabafundi kanye nenethiwekhi yezindawo zokucwaninga zaseyunivesithi ezifundeni ezinhlanu, ezisekelwa yi-African Union. Inhlangano entsha nayo ...
INDODA YAMABHIZINISI waseNigrian UKUZE YENZE IMIKHALAZO E-10 E-AFRIKA
UTony Elumelu, usomabhizinisi waseNigeria futhi ongusihlalo we-Heirs Holdings, ukhuluma ne-AFP engxoxweni ezoba ngo-Okthoba 11, 2013 eWashington, DC. U-Elumelu usethembisile ...
UPettie Petzer noJohan Jonker, abantu baseNingizimu Afrika ababili, bakha isondo lesitsha eminyakeni embalwa edlule okwenza kube lula ukuthi abantu basemakhaya bathuthele amanzi. Amanzi weHippo ...
I-Afrikhepri ingenye yezisetshenziswa zomphakathi zokwabelana ngolwazi. Akusebenzi ukuzuzisa umbuthano omncane wabantu kepha ngentshisekelo ejwayelekile. Inhloso yawo uku ...
I-AFRIKHEPRI yisigcawu sokuqala kwezenhlalo nezemfundo namasiko e-Afrika. Yenza umnikelo: https://www.paypal.me/afrikhepri
Abafundi abathathu basekolishi basungula ikhondomu eshintsha umbala ekuxhumaneni ne-STD
Abafundi abathathu basekolishi lamaNgisi babekhethwe emncintiswaneni wokwakha ikhondomu ehlakaniphile eshintsha umbala uma ibona isifo esithathelwana ngocansi, kubika i ...
Imboni yezicathulo idlule izinguquko eziningi eminyakeni engama-30 edlule. Kusuka ekuqubukeni kwemikhiqizo yomhlaba wonke efana neNike, Jordan, Adidas ne-Converse kuya phezulu ...
Emavikini ambalwa, kuzokwethulwa lo mqondo futhi sesivele sibikezela ibhokisi eligcwele lolu hlelo lokusebenza oluzothuthukisa ubuhle bezinwele ze-Afro. Iphrojekthi yomphakathi, iNeverme ivumela i-Afro, abesifazane base-Afro-Caribbean ...
I-Toubab (ku Wolof tubaap, tubaab, also toubabe, toubabou, tuab, tubab) igama elisetshenziswe eNtshonalanga Afrika, ikakhulukazi eSenegal, Mauritania, Gambia nase Mali, kodwa futhi ...
NgeLifi, ukuphela kwamagagasi omsakazo ayingozi. Ubuchwepheshe be-Lifi buyindlela entsha yokuhambisa idatha yedijithali isebenzisa ukukhanya. Isethulo sevidiyo se-MWC ...
Ucwaningo olwenziwe ngudokotela wezengqondo uKenneth Clark olwenziwe ngawo-50 lwaluhlose ukukala umthelela ubandlululo (olwalukhona ngaleso sikhathi) emfanekisweni ezazinazo izingane ezimnyama ...
Ikhasinkomba 3 of 7 ngaphambi 1 2 3 4 ... 7 okulandelayo